Umhla My Pet » 4 Iingcebiso mhla First
4 Iingcebiso mhla First
Imihla Okokuqala ezinokuliqhekeza ukutshintsha ubomi bethu. Ndiyaqonda ukuba xa ukuba ngoku ulungiselela enye, Mhlawumbi nje wenza flip sakho isisu, kwaye ukuba uxolo! Eyona ndlela ibhetele ukungena umhla wokuqala ukuba bakhululeke, ngoko ayilibale into ubomi atshintsha yonke. kunokuba, makhe siqwalasele incoko.
izihlandlo ezininzi, sicinga kwemihla okuqala kudliwano, leyo ngokuqinisekileyo kucwangcisa mood ingqungquthela akancedi ngokupheleleyo yokuzonwabisa, kunye nento eyayiza zixhaphakileyo ukuba ndlebe lomsebenzi ukuphakuzela, kunene? Xa sele luvo, ngamanye amaxesha siyazilibala sesona sixhobo kakhulu encokweni njengoko lwethu: ukuphulaphula.
Oku kuse- ezilula, kodwa ke ngokumangalisayo inqabe kwihlabathi lanamhlanje. Siya kugxininisa kakhulu kangangokuba ekulungiseleleni amagqabaza zethu nehlekisayo okanye iinkonzo ogqibeleleyo ukuba ulibale Tune ngokupheleleyo ukuba omnye umntu. Ndakhe ndeva ezininzi enkulu ethwala olunye-, yaye ndiyakuthanda guys funny, kodwa kuthekani mfo ngoobani uyakuphulaphula nto uyithethayo? kakuhle, nguye umgcini. Ukuba yena funny, ngokunjalo, yazi ukuba nzulu betha iJekhpoth.
Madoda afune umfazi ophulaphula, kakhulu! Andithethi ukuva nje amazwi uthi, nangona oko kukuthi lokuqala Inyathelo elibalulekileyo. Eneneni phulaphula amazwi akhe, ilizwi lakhe, ulwimi umzimba wakhe, nezenzo zakhe. Abasetyhini bakholisa ukuba anikele ingqalelo ezi zinto kakuhle kakhulu, kodwa ngemihla kuqala, thina vela kangangokuba wanikela kwiziqu (yokunxiba, iinwele ethu, ukutya amazinyo zethu, owahlawula, kunye reapplications ilipstiki) ukuba silibale isizathu sokuba sibe ngokwenene kukho.
Ukuphulaphula usuku lwakho Oku nakanjani ukunceda ukuhamba ingxoxo. Izakhono zokuphulaphula Bad, Uhlobo A kubuntu? Nantsi indlela:
1. umbuzo: Ukuba iintetho zakho umhla malunga nemisebenzi umsebenzi okanye imidla yobuqu ukuba ningaqondi, okanye imiyalelo into ngaphandle kwimenyu Andizange ndeva, musa imibuzo ukucela engenangqondo. Buza kude. Abantu abathanda ukucacisa oko bakwaziyo lukhulu malunga, kwaye niwalile kanye umhla wakho ingcaphephe, ingaba loo nto iinjini imoto okanye sushi. Ngubani akafuni uzive ngathi ingcaphephe? Sikholisa ukuthetha ngaphezu lukhulu inkanuko zethu, ukuze wena ukwazi ukuba umntu ngendlela enentsingiselo.
2. nqumama: Ukuvumela ixesha lakho umhla ukugqiba iingcinga zakhe yakhe umgangatho pretty - kwaye zibe nzima xa Siyavuya okanye luvo - kodwa Wakuthatha inyathelo elinye umganyana nga ngokwenene ukunika ulwazi. Enye indlela enkulu yokwenza oku kuthatha undirhabulise amanzi njengoko umntu elifeza ingcamango. Inika abantu cwaka ukugcwalisa, kwaye amaxesha amaninzi ufumana ukwazi okungakumbi ngabo kwezi inclusions.
3. uyayiqonda indlela awayevakale-: Mhlawumbi akugqiba nje isidanga, okanye mhlawumbi kuxhomekeke ukuba ukunyuswa. Cinga nje indlela obuya kuziva kweso sikhundla. Wena Mhlawumbi ufuna ukuthetha ngayo kwiiklasi zakho ozithandayo, into ofuna ukuyenza endle, okanye iiprojekthi uke wasebenza kwi sikhwele ileli. Ngoku unayo imibuzo ezinkulu. Esi sisihlandlo apho ukuzingca angabonisa luncedo kakhulu ukufunda omnye umntu.
4. phinda: Ukuba abachaphazelekayo luvo ukwenzela ukuba brokholi exabileyo amazinyo akho kwaye nje nako ukuze baqwalasele iinkcukacha yomsebenzi wakhe xa uziva baziimfama ngenxa sibumbeneyo ebhegini yakho, kwi unguyena mncinanana uzame ukukhetha up on amagama angundoqo. Ngaba wathi entry data? Ngoku buza imibuzo malunga uhlobo lwe data, ukuba le into ayithandayo, okanye ukuba usebenzisa izixa mass caffeine ukuba liphumelele kufuneka. kodwa iqiniso, niwulibale compact xa unako, kwaye ucele nje kuye!
Kanjalo, ngokubuza imibuzo malunga pet umhla wakho(s) Kunconywa. Hayi nomthandi wezilwanyana? Hlola, ndiyacela. Nditsho ke jest (kwaye uhlobo nzulu.)
Nandipha umhla wakho kuqala, Phola, kwaye wonwabe! Nje Khumbula ukuba ukumamela. Ubomi bakho kungathi utshintsho enyanisweni, kodwa hey, akukho uxinzelelo.
Ngeendlela ezintlanu Fumana Umva ex yakho.
umphezulu 10 Iimpazamo Amadoda Yenza Xa Inxibelelana Women umxokozelo